Pabrikan'ny varahina CNC mora vidy sy mpamatsy | Ouzhan
Ny varahina dia firaka vita amin'ny varahina sy zinc, ary fitaovana mety tsara amin'ny famokarana ireo masinina vita amin'ny milina CNC (ao anatin'izany ireo faritra ampiasain'i CNC).
Ampahany fanodinana varahina CNC
Ny fikosoham-bary CNC dia tokony hametraka takelaka iray na iray amin'ny lovia eo amin'ny spindle, ary ny spindle dia misy fitaovana fanapahana. Ny toetran'ny mekanika amin'ny fanapahana koa dia malaza kokoa noho ny fitaovana varahina. Ny fantsom-by vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina dia malefaka ary mahazaka fanoherana mahery vaika. Ny singa fitotoana mazava tsara ao amin'ny milina fanodinam-bolan'ny CNC dia mety amin'ny fitaovana indostrialy, trano an-trano, fifandraisana ary solosaina.
Tombontsoa amin'ny faritra famolahana varahina any Shanghai Ouzhan
- Fanoherana matanjaka
- Fikojakojana tsara
- Mora endrika
OEM namboarina fanodinana varahina-China Shanghai Ouzhan CNC mpanamboatra varahina faritra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny fizarana varahina vita amin'ny CNC mihodina avo lenta misy kalitao azo antoka sy azo itokisana. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana mahomby sy miasa dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny milina fanodinana varahina. Ho fanampin'izay, ny vokatra vita amin'ny varahina namboarina tamin'ny cnc dia nanaraka fatratra ny fenitra manara-penitra ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana izahay ho an'ny vokatra fikosoham-bolo varahina ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy.
Fampiharana ny faritra fanodinana varahina
Ny medikaly sy ny pharmaceutika, ny fiara mandeha amin'ny fiara, ny tafika, ny fitaovana, ny kilalao, ny fifandraisan-davitra, sns.
Tombony amin'ny serivisy fanodinana varahina Ouzhan
- Ny vokatra vita amin'ny varahina vita amin'ny cnc rehetra dia iharan'ny fizahana kalitao henjana.
- Ny serivisy OEM Express dia afaka miantoka fa mahazo ireo vokatra tadiavina ianao, manohana ny DDP, CIF, FOB ary fomba fandoavam-bola fitaterana hafa hahazoana antoka fa afaka mandray tsara ny entana ny mpanjifa.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny fanamboarana ny faritra fikosoham-bary.
- Eo amin'ny sehatry ny fittings varahina, ny tombony lehibe azonay dia ny famokarana fittings varahina, valves ball sns, ary manana fiaraha-miasa akaiky amin'ireo orinasa lehibe any Eropa, Korea atsimo, Thailand, sns izahay.
Previous: Namboarina manokana vy vy faritra
Manaraka: Namboarina manokana vy mihodina faritra manodina faritra milina
Namboarina electroplated varahina fikosoham-bary faritra ...